တောင်သမန်သားလေး: July 2017
Android ဖုန်းထဲ့မှာ ကြိုက်တာဒေါင်းလို့ရတဲ့ - Google Play Store Latest Version 8.0.26 Apk
Android ဖုန်းထဲ့မှာ ကြိုက်တာကို ဒေါင်းလုပ် install လုပ်လို့ရတဲ့ Google Play services နောက်ဆုံးထွက် version သစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးမှာတော့ မိမိကြိုက်တဲ့ android application ထည့်သွင်းလို့၇နိုင်တဲ့ android application လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိမိသုံးထားသော Android application တွေကိုလည်း updated လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ android application လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေး ၏ version ကတော့ (Google Play services)8.0.26 နောက်ဆုံးထွက်ပါ။ အသုံးပြုလို့သူများအတွက် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေး၏ ဖိုဒ်ဆိုဒ်လေးကတော့16.15MB ဖြစ်ပြီး ဒီကောင်ကိုတော့ ဖုန်းအားလုံးမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Facecook အကောင့် လုံခြုံဖို့အတွက် ဖတ်သင့်တဲ့ "Facebook ကို Hack မခံရအောင်" စာအုပ်
Facebook ဆိုတာ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ပိုင်ရှင်၏ ဒိုင်ယာရီ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါကို မသမာသူတစ်ဦးက ဟက်ပြီး အလွဲသုံးခြင်းဖြင့်၊ ကာယကံရှင်ဟာ အမုန်းခံရခြင်း၊ အရှက်ရခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဥပဒေနှင့်ညိစွန်းဖြေရှင်းရခြင်း စသည်တို့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ မလိုလားအပ်သည်များမှ ၉၉% ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်နိုင်ရန် ကိုဇာနည် ကစေနာဖြင့် ကူညီလမ်းပြထားပါသည်။
ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်ယူပါ။
စာအုပ်အမည် - iPhone အသုံးပြုသူများနှင့် စက်ပြင်ဆရာလက်စွဲ
ရေးသားသူ - ရဲမင်းအောင် (RAY-Electronic)
အမျိုးအစား - PDF
အရွယ်အစား - 16.0 MB
9008 Mode ကနေ 9006 Mode ကို အလွယ်တစ်ကူဝင်လို့ရမယ့် One Click Tool လေးပါ။
Credit : July_Tharlay
Microsoft Office 2016 နှင့် 365 Official ISO များစုစည်းမှု (1Click Download)
Microsoft Office ကို တော်တော်များများပြောလာကြလို့ Microsoft Office 2016 နဲ့ 365 Official ISO များစုစည်းပေးထားတာလေးကို တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ 1Click Direct Link ဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူရတာလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါခင်မျ.....။
Download Microsoft Office Actovator
Xiaomi ဖုန်းများအတွက် Gapps ကို အဆင်ပြေဆုံးထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ Xiaomi Tool
Thursday, July 20, 2017 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
Xiaomi ဖုန်းများအတွက် Gapps ကို အဆင်ပြေဆုံးထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းများနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကို လွယ်လွယ်ကူကူရယူနိုင်ရန် Downloader Tool လေးကို ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Tool လေးကနေပြီး Xiaomi MiUi7နဲ့ 8 တွေမှာ Gapps ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံး ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Button လေးခုအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး All Devices ဆိုတဲ့ Button ကတော့ Mi Max နဲ့ အခြား Devices များအားလုံးကို အဆင်ပြေစေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသုံးခုကတော့ Mi5, Mi6, Mi Max2တို့မှာ Gapps ကိုအဆင်ပြေဆုံး နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ zip ဖိုင်များရဲ့ Password များကို Tutorial ထဲမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒီ Tool အတွက် Gapps ထုတ်ပေးပြီး နည်းလမ်းများကို မျှဝေပေးထားတဲ့ Ko Than Toe Aung , Ko Aung Min Han , Ko Oak Soe Khant တို့ကို Credit ပေးပါတယ်။ Tool လေးကိုတော့ အသုံးပြုလိုရင်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Password - KoHtoo092208
USB Pin Drive ထဲသို့ ISO ဖိုင်​လ်​အမျိုးမျိုး ထည့်​သွင်းနည်း
USB Pin Drive (သို့) Memory Card တစ်​ခုတည်းမှ Window 10, 8,7နှင့်​ အခြား ISO ဖိုင်​လ်​များကို All in One Bootable Disk အဖြစ်​ ဖန်​တီးပြီး Operating System (OS) အမျိုးမျိုးကို Boot Menu မှ တဆင့်​ Install ပြုလုပ်ခြင်း၊ Recover ပြုလုပ်ခြင်း ထည့်ထားသည့် ISO ဖိုင်လ်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်​နိုင်​ပါတယ်​။
1.USB/Memory Card ကို Format ချပါ၊
2. "WinSetupFromUSB 1.8.exe" ကို Run ပါ၊
3.အပေါ်နားက "Auto format it with FBinst" ကို Check လုပ်ပါ။ (ဒီတစ်ကြိမ်ပဲ Check လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ISO ဖိုင်လ်ထည့်မယ်ဆိုရင် Check လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး)
4. သက်ဆိုင်ရာ ISO အလိုက် ထည့်ပေးပြီး GO ကို နှိပ်ပါ.. Popup Box နှစ်ခု တတ်လာရင် OK ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
အဆင်​မ​ပြေရင်​ ​အောက်​က Video မှာ လက်​​တွေ့ ရှင်းပြထားတာက်ို ကြည့်​နိုင်​ပါတယ်​။
Windows 7, 8,/8 1, 10 ISO နှင့် Office 2013/2016 ဖိုင်လ်များကို Direct ဒေါင်းယူနည်း (Without Any Software)
Window7မှ စ၍ Window 8/8.1, 10 ISO ဖိုင်လ်များ၊ Microsoft Office (All Products) ဖိုင်လ်များကို တကူးတက လိုက်ရှာနေစရာမလိုပဲ Microsoft Original ဖိုင်လ်များဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်နေရာထဲမှ လိုအပ်ရာကို Direct ဒေါင်းယူရရှိနိုင်ပါတယ်...။ Download ရယူဖို့အတွက်လည်း မည်သည့် Software မှ အသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးခင်မျာ...
လိုအပ်လို့ ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...
(၂). Drop down menu ကို တစ်ခုချင်း နှိပ်ကာ မိမိဒေါင်းယူမည့် Windows Version, Edition, Language စ,တာတွေကိုရွေးပေးပါပြီးတာနဲ့ ညာဖက်မှာ Download ဆွဲဖို့ Button လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. မိမိစက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 32Bit (or) 64Bit ကိုရွေးကာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ..။
Posted by lin linn at 2:43 AM
Posted by lin linn at 5:27 AM
♪ iPhone တစ်လုံးကို Setup လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပြုလုပ်ရမယ့် အချက်များ ♫
iPhone အသစ်တစ်လုံးကို setup လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းကို firmware ပြန်တင်ထားပြီးတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone တစ်လုံးကို အသစ်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါ သုံးစွဲသူတွေအတွက် သုံးစွဲသူတွေအတွက် လိုအပ်မယ့် Apple ID ပြုလုပ်ခြင်း font ထည့်သွင်းခြင်း Keyboard တွေ ထည့်သွင်း ခြင်းအစရှိတာတွေ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် iPhone တစ်လုံးကို setup လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သုံးစွဲသူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖုန်းကို စတင်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အဆင့်အထိ အောက်ပါ နည်းလမ်း တွေအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၁) Apple ID ပြုလုပ်ပါ။
iPhone တစ်လုံးကို သုံးစွဲပြီဆိုရင် Device ရဲ့အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်စေဖို့နဲ့ app တွေ game တွေကို download ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Apple ID တစ်ခု ဖန်တီးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ID ကို ဖန်တီးချင်သူတွေ အနေနဲ့ ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေအတိုင်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Apple ID ကို iPhone ပေါ်ကနေ ဖန်တီးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ iTunes software ကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
iPhone ပေါ်ကနေ ဖန်တီးနည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်က ဖန်တီးနည်းဟာ သိပ်ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး။ iPhone ပေါ်ကနေ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် App Store icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Free app တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Get ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Install ကို ထပ်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆိုပါ app ကို ထည့်သွင်းဖို့အတွက် Apple ID Sign In လုပ်ရမယ့်နေရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ဖန်တီးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Create New Apple ID ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Country တစ်ခုကိုရွေးရပါမယ်။ US store ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် United States ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကို နှိပ်ရပါမယ်။
Apple ရဲ့ Terms and Conditions တွေနေရာရောက်ရင် Agreed ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့ Apple ID လုပ်ဖို့အတွက် email ထည့်သွင်းရမယ့် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Email ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Gmail, Hotmail ဒါမှမဟုတ် အခြား business mail တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Password နေရာမှာ Apple ID မှာ အသုံးပြုမယ့် password ကို ထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Apple ID password တွေအတွက် စာလုံးအကြီးအသေး ဂဏန်းနံပါတ်အပါအဝင် စာလုံးရေအနည်းဆုံး ၈ လုံးခန့် အသုံးပြုရပါမယ်။ ပြီးရင် Verify Password နေရာမှာလည်း အရှေ့မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ password ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ Password ထည့်သွင်းပြီးရင် Secuirty Info ဆိုတဲ့နေရာမှာ Security Question တွေကိုရွေးချယ်ပြီး အဖြေတွေကို နှစ်သက်သလို ထည့်သွင်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Security Question နဲ့ အဖြေတွေကို မမေ့လျော့စေရန်အတွက် သေသေချာချာ မှတ်ထားရပါမယ်။ Apple ID လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် Apple ဟာမိမိရဲ့ password ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးက သိရှိနေတာတောင် security question တွေရဲ့အဖြေကို မသိရှိဘူးဆိုရင် purchase ပြုလုပ်ခြင်း password reset ပြုလုပ်ခြင်းအစရှိတာတွေကို မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် security question နဲ့ အဖြေတွေကို သေသေချာချာ မှတ်ထားရပါမယ်။ Security Question ထည့်သွင်းပြီးရင် Optional Rescue Email နေရာမှာ mail တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ အောက်ဘက်မှာ မွေးနေ့ကိုရွေးချယ်ပြီး ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ payment method ရွေးချယ်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ payment ထည့်သွင်းတဲ့ Apple ID ပြုလုပ်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် None ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ US store ကို အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် US store လိပ်စာတွေကို သုံးစွဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် http://www.fakenamegenerator.com ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာမှာ Fake account တွေကို သွားရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖြည့်ပါ။ ဖြည့်ပြီးသွားရင် Next ကို နှိပ်ရပါမယ်။
အဆိုပါ အဆင့်တွေပြီးရင် Apple ID ကို verify လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ mail box ထဲကနေ apple ကပေးပို့လာတဲ့ မေလ်းကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် verify ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး Apple ID မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ password ကို တစ်ခါ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် Apple ID ကို မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကနေ ဖွင့်တဲ့နည်းပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Zawgyi font ထည့်သွင်းပါ။
Zawgyi font ထည့်သွင်းဖို့အတွက် Safari browser ကို ဖွင့်ပါ။ Safari browser ထဲက address bar မှာ shwe.co/zawgyi ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် keyboard ကနေ go ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Install Profile ဆိုတဲ့နေရာမှာ ZawGyi Font ဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ အပေါ်ဘက်နားမှာ Install ဆိုတဲ့ button ကိုတွေ့ရပါမယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Install ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် Zawgyi font ကို profile မှာ install လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ Profile မှာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Settings > General > Profile မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Zawgyi font ကို ထည့်သွင်းပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Keyboard ထည့်သွင်းပါ။
Zawgyi font ကို ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် မြန်မာစာတွေရိုက်ဖို့အတွက် Myanmar keyboard တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းဖို့ App Store ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Search မှာ Myanmar Keyboard ဆိုတဲ့ keyword ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Myanmar keyboard တွေကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒီမှာတော့ TTKeyboard ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Keyboard ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုရင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Settings > General > Keyboard > Keyboards ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Add New Keyboard ကိုနှိပ်ပြီး ခုနကထည့်သွင်းထားတဲ့ TTkeyboard ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Zawgyi ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် keyboard နေရာမှာ Zawgyi- TTKeyboard ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနေရာကို ထပ်မံနှိပ်ပြီး Allow Full Access ဆိုတဲ့နေရာမှာ toggle ကို enable လုပ်ပေးရပါမယ်။
Posted by lin linn at 5:17 AM
အသုံးများသော မြန်မာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောများ (1000) ကျော်ကို သင်ခန်းစာအလိုက် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ။
ယခု Application အား မြန်မာလူမျိုးတို့ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး တိုတတ်ကောင်းမွန်စေလိုသောစိတ်ကူးဖြင့် " အသုံးများသည့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောများ" စာအုပ်မှ အခက်အလက်များဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖိုင်ဆိုဒ်က4Mb သာရှိလို့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Labels: Android Myanmar Apk များ စုစည်းမှု, Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် -Facebook Latest Version 131.0.0.32.69 for Android
အထွက်callကိုသူများတွေခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးမဲ - Call Blocker Latest Version 1.0.85 for Android
♪ သင့်ဖုန်းမှာ Storage နေရာပြည့်သွားရင် အရင်ဆုံး ဖယ်ရှားရမယ့် အရာများ ♫
iOS7ဟာ သင့်ရဲ့ iPhone မှာ 3.1GB လောက် နေရာယူပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံများနဲ့ Apps များကို ထည့်သွင်းလာတာနဲ့အမျှ ဖုန်းရဲ့ Storage ဟာ ပြည့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်းမှာ နေရာယူထားတဲ့ အရာများကို သေချာစွာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ iPhone မှာတော့ Settings> General > Usage ထဲသွားရင် သင့်ဖုန်းမှာ နေရာ အယူဆုံး Apps များကို အစဉ်လိုက် ပြသပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android Smartphone များမှာလည်း ဒီလို Usage Menu ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Settings သို့မဟုတ် My Device App ထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Apps များအပြင် သင့်ဖုန်းမှာ နေရာအများဆုံး ယူထားတဲ့ အခြားအရာများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်းမှာ Storage နေရာပြည့်သွားရင် အရင်ဆုံး ဖယ်ရှားရမယ့် အရာများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုများ
ဗီဒီယိုဖိုင်များဟာ အရွယ်အစား ကြီးမားကြပါတယ်။ HD Video တစ်ကားရဲ့ တစ်မိနစ်စာဟာ 78MB လောက် ရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုများဟာ သင့်ဖုန်းမှာ အဓိက နေရာယူထားတဲ့ အရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်းမှာ နေရာလွတ် မရှိတော့ရင် ဗီဒီယိုများကို သင့် ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် External Hard Drive များထံ ကူးပြောင်းသင့်ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းများဟာ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ရိုက်ကူးပေးနိုင်လာပါပြီ။ ဓါတ်ပုံများရဲ့ အရည်အသွေး မြင့်မားလာလေလေ ၊ ဖိုင် အရွယ်အစား ကြီးမားလာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်းမှာ နေရာလွတ် မရှိတော့ရင် ဓါတ်ပုံများကို Cloud များမှာ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် External Hard Drive များထံ ကူးပြောင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
MP3 တစ်ပုဒ်ဟာ 3MB လောက် နေရာယူပါတယ်။ သီချင်း အယ်လ်ဘမ် တစ်ခုဟာ 30MB ကျော် နေရာယူပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်းရဲ့ Storage ပြည့်သွားရင် သီချင်းများကို ဖုန်းကနေ အရင်ဆုံး ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ Spotify လို အွန်လိုင်း အခြေပြု သီချင်း ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၃။ App များ
App အများစုက နေရာ အရမ်း မယူကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ဖုန်းမှာ App များစွာ ထည့်သွင်းထားရင်တော့ အသုံးမပြုတဲ့ App များကို ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ iPhone မှာ App ကို ဖိထားပြီး Uninstall လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android စမတ်ဖုန်းများမှာလည်း အဲဒီနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android မှာ Widgets နဲ့ ဖိုဒါများကလည်း နေရာယူကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Manage My Applications ထဲမှာ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
၄။ Cache များကို ရှင်းလင်းပါ။
သင် ဖုန်းကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမို ပြည့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အမှိုက်ဖိုင်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Android မှာ Manage My Applications ထဲသွားပြီး App တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Cache ခေါ် အမှိုက်ဖိုင်များကို ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ App အားလုံးရဲ့ Cache များကို တစ်ပြိုင်နက် ရှင်းလင်းပေးတဲ့ Cleaner App များကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ iPhone မှာတော့ Usage ထဲမှာ ဖျက်နိုင်တဲ့ App Data များကို ပြသပေးထားပါတယ်။
သင့်ဖုန်းမှာ နေရာလွတ်များ ရနိုင်မယ့် အခြားနည်းလမ်းများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သင့် ဘရောက်စာရဲ့ History များ၊ မလိုအပ်တော့တဲ့ Contacts များ၊ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ Reminder များ၊ မှတ်စု အဟောင်းများ၊ SMS နဲ့ Messages အဟောင်းများကို ရှင်းလင်းခြင်းက နေရာလွတ်များ ရစေပါတယ်။
Posted by lin linn at 4:13 AM
ဒီနေ့ထွက် - Messenger Latest Version 124.0.0.43.69 for Android
ဝင်းလှိုင်- နည်းပညာ3days ago Facebook Messenger
facebook သုံးတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် facebook messenger လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကိုတော့အားလုံးသူသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီး ဒီမှာတော့ ဟိုတုန်းက version ထက် ချစ်စ၇ာ အရုပ်ကလေးများပါလာတာကိုတွေ၇ပါတယ်။ updated သုံးချင်းတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်းကတော့ 47MB လောက်ရှိပါတယ်။
Posted by lin linn at 4:08 AM
အရုပ်ဆိုးနေသလား ဒီကောင်လေးနဲ့ ချောချော ရုပ်ကလေးလုပ်/ ရိုက်ပြီး ဟာသပုံစံတွေပါတဲ့ -Camera360 Latest Version 8.6.1 for Android
Android phone/Tablet အသုံးပြုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိသူတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေး Camera360 - Funny Stickers v8.6.1APK ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Camera360 ဟာ Android phone/Tablet အသုံးပြုသူတိုင်းမစိမ်းတော့တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Camera mode များစွာကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ရူပါ ဂွမ်းတဲ့သူတွေတောင် လန်းလာစေမယ့် ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပြီး ဟာသ ပုံစံတွေနဲ့ ဖန်တီးလို့ရတဲ့ Android app ပေ့ါဗျာ။ အခုနောက်ထွက်ဗားရှင်းမှာလည်း Camera Store/Effect Store စသဖြင့် features များထပ်ပေါင်းထားတာတွေ့ရပြီးရယူလိုသူများအောက်လင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 3:59 AM
♪ “ iOS 11 Public Beta ဗားရှင်းရရှိနိုင်မယ့် iPad နဲ့ iPhone စာရင်းများ ” ♫
ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲ သင်ဟာ iOS 11 Public Beta ကိုရယူဖုိ့အတွက် တွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်စမတ်ဖုန်းတွေမှာ iOS 11 Beta ဗားရှင်းရမလဲဆိုတာ သိထားဖုိ့လိုအပ်ပါတယ်။
iOS 11 Beta ရရှိနိုင်မယ့် iPad နဲ့ iPhone အမျိုးအစားတွေကတော့
• iPhone 7/7 Plus တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
iOS 10 အသုံးပြုနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းအားလုံးမှာ iOS 11 beta အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ
• iPad4တို့မှာတော့ iOS 11 beta မရရှိနိုင်ဘူးလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Apple ရဲ့မော်ဒယ်အဟောင်းတွေထဲမှာမှ iPhone 5s နဲ့ iPad Air ကိုတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ iOS 11 က ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
iOS 11 Beta ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုသူတွေအနေနဲ့ beta.apple.com မှာ စာရင်းသွင်းရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။